Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - လူကြီးများနှင့်ကလေးများ2Rechargeable ဘက်ထရီ 2.4GHz ရေဒီယို Remote Control ကို Truck ကား Monster အမြင့်မြန်နှုန်း crawler က USB အားသွင်းကိရိယာ RC ကား (အပြာရောင်) နဲ့ RC ကား KOOWHEEL 1:16 စကေး 2WD ဟာ Off လမ်းမကြီး Remote Control ကိုကား
လူကြီးများနှင့်ကလေးများ2Rechargeable ဘက်ထရီ 2.4GHz ရေဒီယို Remote Control ကို Truck ကား Monster အမြင့်မြန်နှုန်း crawler က USB အားသွင်းကိရိယာ RC ကား (အပြာရောင်) နဲ့ RC ကား KOOWHEEL 1:16 စကေး 2WD ဟာ Off လမ်းမကြီး Remote Control ကိုကား
1:16 စကေး, လွတ်လပ်သောရပ်ဆိုင်းမှု, သင့်ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုမြေပြင်အနေအထား, ဒီကမ်းခြေ, သဲ, မြက်များနှင့်နေရာတိုင်းမှာသင်ချင်ပါတယ်ကစားဘို့ခွင့်ပြုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကားတစ်စီး RC ။
2.4 GHz အမြန်နှုန်း Remote Control ကို:
ခိုင်ခံ့သော Anti-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်, တူညီတဲ့အချိန်နှင့်နေရာမှာအတူတူပြိုင်ကားဖို့မျိုးစုံကားများကို enable ရာ။ သငျသညျ2ပိုပြီး KOOWHEEL rc ထရပ်ကားရဆိုပါကအနားမှာအများကြီးအဝေးထိန်းကားများဘက်ကို run ဖို့ပိုပြီးပျော်စရာပါပဲ။
Koowheel ကားများ2ဘက်ထရီအတူပါလာ, 12 တစ်နာရီမိုင်၏အင်ဂျင်လက်လှမ်းမမီထိပ်တန်းမြန်နှုန်းဘို့ပါဝါကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ အပြည့်အဝဘက်ထရီ 10-15 မိနစ်သို့ပွေးလေ၏နိုင်ဘူး။ USB port ကိုမှတဆင့်ဘက်ထရီအားသွင်း, သင်စတင်ရန်လိုအပ်ရှိသမျှကို transmitter ကို3AA ကိုဘက်ထရီများမှာ!
အပြည့်အဝ function ကိုထိန်းချုပ်မှု, ရှေ့ဆက် / ညာဘက် / / လက်ဝဲ reverse ။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကားအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်စတီယာရင်နဲ့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာရှိပြီး, အ Ergonomics ဝေးလံခေါင်သီအစပြုသူများအတွက်သာလွန်ထိန်းချုပ်မှုသေချာနိုင်ဘူး။
KOOWHEEL အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေပေးသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအမိန့်အသစ်တဦးတည်းဖလှယ်။ အခမဲ့ပြုပြင်ခြင်းနှင့် 365 ရက်အတွင်းအမိန့်များအတွက်အမေရိကန်အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစားထိုး။ 24 နာရီအတွက်တုန့်ပြန်ဖို့အဆင်သင့်။ သို့ဖြစ်. လှည်း ADD!
2.4G remote control CAR2.4 GHz အမြန်နှုန်းရေဒီယိုထိန်းချုပ်: ခိုင်မာတဲ့ Anti-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်, တူညီတဲ့အချိန်နှင့်နေရာမှာအတူတူပြိုင်ကားဖို့မျိုးစုံကားများကို enable ရာ။ သငျသညျ2ပိုပြီး KOOWHEEL rc ထရပ်ကားရဆိုပါကဘေးထွက်အားဖြင့်များစွာသောကားများဘက်ကို run ဖို့ပိုပြီးပျော်စရာပါပဲ။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ:3reasons below for short-driving-time of the battery :
ယခင်: အရွယ်ရောက်ကလေးတွေကအဘို့အဘလူးတုသ်ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း Scooter နဲ့အတူ Koowheel K3 6.5 လက်မလျှပ်စစ် Hoverboard
နောက်တစ်ခု: ကလေးတွေကအဘို့အရှေ့မီးကလေးများမွေးနေ့လက်ဆောင်များ RC Car ဖြင့် 2.4GHz High Speed ​​ရော့ခ် crawler ယာဉ် - RC ကားကလေးများ KOOWHEEL Remote Control ကိုကားများအတွက် 360 Rotate 4WD ဟာ Off လမ်းမကြီးနှစ်ချက် Rotate လိမ့်ကျခြင်းဘက်
Koowheel အကောင်းဆုံးဆိရဲ့လျှပ်စစ်ပါဝါ-ကူညီရန် ...
KOOWHEEL နယူးဒီဇိုင်းကိုစမတ်မိမိကိုယ်ကို balan Hovershoes ...
Koowheel L10-X ကို 2019 ဆန်းသစ် 8 လက်မ Lightweig ...
Koowheel ခရစ္စမတ် 8600mAh လီမိတက် Edition ကို 2nd ...